Obama tany Afrika 2009 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2019 4:20 GMT
Ny lahatsoratra feno tamin'ny kabarin'i Obama tao Ghana (na rakipeo ).
Kabarin'i Obama tao Ghana amin'ny teny swahili .
Nanao antsafa niaraka tamin'ny filoha tao amin'ny Trano Fotsy talohan'ny diany ny AllAfrica.com .
Tsindrio eto ho an'ny fizarana faharoa amin'ny lahatsary ity.
Nanao ezaka manokana ny Trano Fotsy mba hifandraisana tamin'ny alàlan'ny SMS, onjam-peo, fandefasana sary mivantana amin'ny aterineto ary ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera amin'ny olom-pirenena tao Afrika nandritra ny fitsidihan'ny filoha.
Nanoratra momba ny fanontaniana avy amin'ny Afrikana ho an'i Barack Obama i Rafiki Kenya : “Nandritra izany fotoana izany, nizara sarintany ifarimbonana ny Trano Fotsy … Misy fanontaniana manan-danja mikasika ny fisian'ny kolikoly.”
Nanasongadina ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy Afrikana ihany koa ny bilaogin'ny governemanta Amerikana ao amin'ny America.gov antsoina hoe By the People taloha sy taorian'ny fitsidihan'ny filoha tao Ghana.